MacBook Pro M1 Max ayaa la xaqiijiyay inuu ugu fiican yahay sawir qaadayaasha | waxaan ka imid mac
MacBook Pro M1 Max ayaa la xaqiijiyay inuu u fiican yahay sawir qaadayaasha
Markii Mac-yada cusub ee M1 lagu soo bandhigay suuqa, awoodda ay bixinayaan ayaa ahayd mid aad u weyn. Dhab ahaantii, kuwa cusub ee MacBook Pros waxay bixinayeen natiijooyin ka wanaagsan kan Mac Faa'iidooyinka iyo dabcan aad uga fiican Intel ugu fiican. Waqtigaas waxaa la malaysanayay in chips-yada cusub ee M1 ay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee kombiyuutarku yeelan karo. Shirkado badan ayaa bilaabay isticmaalka Mac-yadan Wax-soosaarkooduna kor buu u kacay. Hadda waa waqtigii la xaqiijin lahaa mid ka mid ah waaxaha aadka ugu baahan awoodda Macs. Sawir qaadayaasha.
Marka mid la yiraahdo Mac-yada cusub ee leh M1 waa kuwa ugu fiican marka la eego fadhiyada sawir qaadista, ma jiraan wax ka fiican in lagu taageero caddaynta. Haddii aad tahay taageere sawir-qaadista, waxaad ogaan doontaa in kamaradda ka horeysa erayadan ay tahay wax aan caadi ahayn. Waxay u badan tahay inay tahay kamarada ugu fiican ee aad ka heli karto dukaamada. Sida ugu fiican ee qaybteeda sababtoo ah maaha dhammaan sawir qaadayaasha, ka fog. Haddii aad sameyso sawir sawir ganacsi ama istuudiyo ama xitaa muuqaal deggan, Wajiga Koowaad XFIQ4 Waa kan ugu wanagsan ee ugu baahida badan.
Sawirqaade sare CNET Andrew Hoyle ayaa ka warbixiyay khibradiisa la shaqeynta kaamirada qaab dhexdhexaad ah ee Wajiga Koowaad ee ku xiran MacBook Pro ee ku shaqeeya M1 Max oo leh 64GB midaysan. Maskaxda ku hay in ay tahay kamarad awood u leh in ay qabato 150 sawir MPx ah. Imtixaanka, waxa uu sameeyay si uu u sii hagaajiyo imtixaanka oo uu uga dhigo mid aad u culus, waxay ahayd inuu qaado sawirro dhowr ah ka dibna ku biiriyo dhammaantood. Taasi waxay keentay 11 GB ugu dambeeya. Halkan kuma eka. Wuxuu barbar dhigay Mac M1 iyo Intel i9. Natiijadu waxay u hadlaysaa naftooda:
1-inch MacBook Pro M16 Max oo leh 64GB Mid Midaysan (2021) 4 daqiiqo iyo 36 sekan
MacBook Pro M1 13-inch (2020) 6 daqiiqo iyo 39 sekan
9-inch MacBook Pro Intel Core i16 (2019). Waqtiga 16 daqiiqo iyo 36 sekan
Ma jiro wax kale oo la yiraahdo…
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » MacBook Pro » MacBook Pro M1 Max ayaa la xaqiijiyay inuu u fiican yahay sawir qaadayaasha